Ndị Na-enyere Kọmitii Òtù Na-achị Isi Aka
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
KEMGBE afọ 1992, Òtù Na-achị Isi na-ahọpụta ndị okenye ruru eru, ndị ferela Jehova ọtụtụ afọ, ka ha na-enyere kọmitii ha dị́ iche iche aka n’ọrụ ha. * Ụmụnna ndị a só ‘n’atụrụ ọzọ’ na-enyere Òtù Na-achị Isi ezigbo aka. (Jọn 10:16) Ha na-eso kọmitii e kenyere ha aga nnọkọ kwa izu. Ha na-ekwu ihe ha ma banyere ihe a na-atụle, na-atụkwa aro. Ọ bụ Òtù Na-achị Isi na-ekpebi ihe a ga-eme. Ma, ụmụnna ndị na-enyere ha aka na-ahụ na e mere ihe ahụ ha kpebiri. Ha na-arụkwa ọrụ ọ bụla e nyere ha. Ha na-eso ndị só n’Òtù Na-achị Isi aga mgbakọ mba niile na mgbakọ ndị pụrụ iche ná mba ndị ọzọ. E nwekwara ike iziga ha alaka ụlọ ọrụ dị́ iche iche ka ha nọchite anya isi ụlọ ọrụ anyị.
Otu nwanna só na-enyere Òtù Na-achị Isi aka kemgbe afọ 1992 sịrị: “Ịrụ ọrụ e nyere m na-eme ka Òtù Na-achị Isi nwee ike ilekwasịkwu anya n’ọrụ ha.” Nwanna ọzọ rụrụla ọrụ ahụ iri afọ abụọ sịrị: “Ọ bụ ihe ùgwù karịrị ihe ọ bụla m tụrụla anya ya.”
Òtù Na-achị Isi enyela ndị na-enyere ha aka ọtụtụ ọrụ. Obi dịkwa ha ụtọ na ụmụnna ndị a ji obi ha niile na-arụ ọrụ. Ka anyị niile ‘na-akwanyere ndị dị otú ahụ ùgwù.’—Fil. 2:29.
^ para. 2 Gụọ peeji nke 131 n’akwụkwọ bụ́ Alaeze Chineke Amalitela Ịchị! ka ị hụ ebe e depụtara ọrụ niile kọmitii isii nke Òtù Na-achị Isi na-arụ.
Ndị só n’Òtù Na-achị Isi hà bụ ndị isi Ndịàmà Jehova?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọktoba 2015